Aretin-kozatra - Shijiazhuang Yiling Hospital
Diet ny aretin-kozatra
Latest fikarohana momba ...
Soritr'aretina ny aretin-kozatra
Ny tena mampiavaka fahatakarana ny aretina dia ny firaisan-tsain'ny holistic hevitra sy ny dialektika hevitra. TCM momba olombelona amin'ny ankapobeny. Fa ny aretina, dia tsy avy amin'ny aretina mihitsy, fa koa avy amin'ny vatana manontolo ny olombelona. Izany no mahatonga azy mora kokoa ny mahita ny antony mahatonga ny fototry ny aretina.
Ny fitambaran'ny nentim-paharazana sy ny fitsaboana maoderina Shinoa fanafody andrefana dia ny fampidirana ny manontolo sy ny azo tsapain-tànana. Ny fitambaran'ny macroscopic sy bitika dia fitambaran'ny ny firaisan-tsaina sy dialectics. Izy io no tena mahasoa ny vatan'olombelona mba sitrana.
Indrindra ho an'ny kansera, hozatra atrophy, maotera neuron aretina, scleroderma, rheumatism, aretin-kozatra, voan'ny diabeta, aretin'ny voa, miaraka amin'ny nentim-paharazana sinoa sy ny fanafody fitsaboana tandrefana, toetra fanafody fitsaboana nentim-paharazana sinoa, ny vokany dia tena manan-danja.
Raha te-hahafantatra ny fomba nentim-paharazana fanafody Shinoa mihevitra ny aretina sy ny fomba nentim-paharazana sinoa manambatra ny fitsaboana amin'ny tandrefana fanafody hitsaboana aretina. Mijery manam-pahaizana na handao antsika ny hafatra.